“Raharaha Kidnapping”: tratra ny olona efatra, anisany ny vadin’i Lama | NewsMada
“Raharaha Kidnapping”: tratra ny olona efatra, anisany ny vadin’i Lama
Par Taratra sur 25/04/2019
Tratra amin’ny “Raharaha kidnapping” ny olona efatra, ary vehivavy ny roa amin’ireo. Vadin’i Lama, jiolahy raindahiny malaza amin’ny fakana an-keriny, ny iray, ary efa nokarohina ampolo taony. Tsy mbola tratra aloha ity farany…
Niverina tampoka ny anaran’i Lama na Randriamanana Norbert, anisan’ny mpanao kidnapping raindahiny, tsy mbola tratra mihitsy hatramin’izao, na efa tamin’ny taona 1998 aza no nokarohina. Tsy izy anefa ny sarona fa ny vadiny, voasambotra teny Ambodimita ny 18 avrily lasa teo.
« Manoloana ny ady amin’ny tambajotran’ny fakana an-keriny, tsy mitsahatra mikaroka vaovao mahakasika izany ny zandary ka saron’ny avy ao amin’ny “section de recherches criminelles” Fiadanana teny Mahitsy Ambohidratrimo sy teny Ambodimita Ambohimanarina, ny 16 sy 18 avrily 2019 teo, ny jiolahy efa nokarohina hatry ny ela miisa efatra”, hoy ny zandary.
Vehivavy ny roa amin’ireo olona tratra ireo. Ny 16 avrily teo, teny Mahitsy no nahatrarana mpivadikely efa malaza ary tafiditra tamin’ny asa fanaovana fakana an-keriny ary fantatra ihany koa fa efa nanao fanafihana vola tao amin’ny CT iray tamin’ny taona 2012. “Rehefa natao ny fanadihadiana, nanonona ny namany miisa roa izy ireo ka nanao ny vela-pandrika rehetra ny zandary. Eny Ambodimita ny voalaza fa misy ireo namany ireo ka ny 18 avrily no nidinan’ny zandary teny. Tratra tao tokoa ireo olona roa farany: lehilahy iray miaraka amin’ny anabaviny no tao izay tsy iza fa vadin-Randriamanana Norbert na i Lama”, hoy ihany ny zandary. I Lama izay tena atidoha nikotrika ny fakana an-keriny nanomboka ny taona 1998 ary nokarohina fatratra tamin’izany fotoana izany. Nalaza koa tamin’ny taona 2005, naman-dry Mahandry, efa maty teny Ankerana. Tsy hita mihitsy i Lama, ary izao heno izao indray ny anarany. Mbola miriaria any ity jiolahy raindahiny ity.
Fiara sy tranobe nogiazana
Taorian’ny fanadihadiana nataon’ny zandary, natolotra ny fampanoavana, omaly, ireo mpaka an-keriny ary naiditra vonjimaika am-ponja avokoa. Nogiazana ireo fananany izay novidian’izy ireo tamin’ny vola azo tamin’izany ka fiara miisa efatra sy trano lehibe telo eny Ambohibao sy Andakana, ary tany mirefy 62 a eny Mahitsy ireo.
“Nandritra izay telo volana voalohany izay, miisa 27 ny mpanao takalonaina tratran’ny zandary ka nanatevina izany ireto efatra farany ireto. Tsy mianona fotsiny amin’ny vokatra toy izao anefa ny eo anivon’ny zandarimaria fa manohy hatrany ny ezaka koa manentana ny olom-pirenena hampita amin’izy ireo haingana ny vaovao ahafahana miady sy mamongotra ireny mpaka an-keriny ireny”, hoy hatrany ny zandary.